Harry Redknapp oo niyadjab ku riday taageerayaasha Tottenham sababa la xiriira Harry Kane – Gool FM
(London) 02 Juun 2020. Tababarihii hore kooxda Tottenham Hotspur ee Harry Redknapp ayaa aaminsan in Harry Kane ay suurtogal tahay inuu ka tago naadiga reer London.
Weeraryahanka reer England ee Harry Kane ayaa horey u sheegay in hamigiisa shaqsiyadeed uu ku qasbi karo inuu ka fikaro inuu ka tago kooxda Tottenham Hotspur mustaqbalka, maadaama lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Manchester United.
Haddaba Harry Redknapp ayaa wareysi uu ku bixiyay idaacada “Talk Sport” ee dalka England wuxuu kaga hadlay suurtagalnimada uu Harry Kane kaga tagi karo Tottenham wuxuuna yiri:
“Waxaan u maleynayaa in tani ay marwalba tahay macquul, waxaan jeclaan lahaa inaan arko isagoo sii jooga, balse Tottenham waxay u baahan tahay inay ku guuleysato koobab, waqti dheer ayaa ka soo wareegatay arrintaas”.
“Xaqiiqdii uma arko inay u tartami karaan ku guuleysiga horyaalka Premier League xilligan, sababtoo ah uma fiicna sidii ay ahaayeen labo ama seddex sano ka hor”.
“Laba ama seddex sano ka hor, waxaan moodayay in kooxdan ay ku guuleysan karto horyaalka Premier League, markii ay joogeen Kyle Walker iyo Danny Rose oo duulaya iyo Christian Eriksen oo qaab wanaagsan ku jiray”.
“Laakiin uma maleynayo in waqtigan ay u dhowyihiin in taasi ay sameyn karaan, waxaan filayaa inay ka danbeeyaan kooxaha Liverpool iyo Man City laakiin waan hubaa inay ku guuleysan karaan mid ka mid ah koobabka tartamada ay qeybta ka yihiin”.